Maxay tahay diyaaradda ay Iran soo ridday? - BBC News Somali
Maxay tahay diyaaradda ay Iran soo ridday?
9 Nofembar 2019
Ciidamada Iran ayaa soo riday diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ajinabi leeyihiin taas oo mareysay magaalo xeebeedka Mahshahr ee gobolka Khuzestan sidaasi waxaa soo werihyay wakaaladda wararka ee IRNA iyagoo soo xiganaya saraakisha Iran.
''Waxaa hubaal ah in Diyaaradda la soo riday dal shisheeye laga lahaa, waxaana la helay haraageedii, baaritaan ayaana ku socda'', ayuu yiri gabalnatooraha Khuzestan Gholamreza Shariati.
Warbaahinta Iran ayaa baahisay in ciidamada ay soo rideen diyaaradda aan duuliyaha lahayn balse wax faafaahin kama aysan bixin.
Saraakisha iyo warbaahinta Iran ma sheegin dalka laga leeyahay diyaaradda, sidoo kale ma sheegin inay ahayd diyaarad milatari ama mid shacab.
Mareykankana waxa uu sheegay inysan jirin diyaarad Mareykanka uu leeyahay oo la soo riday.
Amir Mousavi oo ah diblomaasi hore oo Iran u dhashay ayaa Al Mayadeen u sheegay inuu aaminsan yahay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee la soo riday ay Israa'iil leedahay taasi oo Iran lagu tijaabinayay.
Mareykanka oo cunaqabateyn saaray wasiirka arrimaha dibaada Iran
Iran oo Gacanka ku qafaalatay markab kale oo shisheeye
Telefishinka Iran ee afka Carabiga ku hadla ee al-Alam TV ayaa sheegay: ''In Dadka deggan magaalo xeebeedka Imam Khomeini ay maqleen subaxnimadii jimcada dhawaqa gantaalo lasoo ganay.''
Bishii June Iran ayaa soo ridday diyaarad aan duuliye lahayn ee uu Maraykanka leeyahay, taasoo ciidamada kacaanka Iran ay sheegeen inay dul mareysay koonfurta Iran. Washington ayaa dhankeeda sheegtay in diyaaraddooda ay Iran soo ridday iyadoo maraysay hawada marinka Hormuz.
Xiriirka u dhaxeeya Iran iyo Maraykanka ayaa sii xumaanayey tan iyo sannadkii lasoo dhaafay, ka dib markii madaxweyne Trump ka baxay heshiiskii nuclearka Tehran ee 2015-kii ay la gashay quwadaha caalamka. Waxaana uu Maraykanka kusoo rogay Iran cunaqabateenno dheeraad ah.